Khilaafka Siyaasadeed ee Gobolka Hiiraan - BBC Somali
Khilaafka Siyaasadeed ee Gobolka Hiiraan
24 Agoosto 2010
Image caption Gobolka Hiiraan ee Somalia
Khilaaf siyaasaded oo hor leh ayaa u muuqda inuu ka abuurmay gobolka Hiiraan, ka dib markii meelo kala geddisan oo debadda ah lagaga kala dhawaaqay maamul-goboleed iyo madaxweynayaal
Toddobaadkani gudihiisii, shir lagu qabtay magaalada Nairobi, waxaa la soo sheegay in nin lagu magacaabo Mahamoud Abdi Gaab loo doortay madaxwaynaha maamul goboleedka Hiraan. Markaas ka bacdi ayaa BBC waraysi ay la yeelatay Mohamoud Abdi Gaab, waxay la weydiiyey marka hore bal in shirka Nairobi loo wada dhammaa iyo in kale?
Hadda ka hor, magaaladan London, ayaa isna nin la yidhaa Abdulqadir Adan Jiraabey la sheegay in loo magacaabay madaxwaynaha maamul goboleedka Hiiraan iyo Midland. Waxanu ku doodayaa inuu isagu weli yahay madaxweynihii Hiiraan. Hase ahaatee waraysi BBC la yeelatay Abdulqadir Jiraabey, ayaa marka hore la weydiiyey bal cidda isagana dooratay?
Mahamed Ahmed Mahamed, Dhega-Weyne, waxa uu isna horay u ahaan-jirey Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan intii aanay ka qabsan Shabaab. Waxanu haatan joogaa magaaladan London. Waraysi isna lala yeeshay ayaa waxa la weydiiyey waxa uu ka qabo maamul-goboleedkan iyo madaxweynaha cusub ee haatan lagu caleemasaaray Nairobi?